Ny GNOME 40 dia azo apetraka amin'ny Ubuntu 21.04 miaraka amin'ity torolàlana ity | Ubunlog
Ahoana ny fametrahana GNOME 40 amin'ny Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo
Fitsapana nandritra ny andro vitsivitsy aho GNOME 40. Ataoko amin'ny USB miaraka amin'ny fitehirizana maharitra Manjaro GNOME izay nanovako ny sampana hampiasa ny safidy tsy milamina, izany hoe ao no ampiana ireo fonosana vaovao. Mahafinaritra ahy tokoa ny mivezivezy ao amin'ny KDE, ary ny tena manameloka dia ny fahatsapana fluidity sy ny fampiharana / fiasan'ny birao, saingy ny GNOME dia ampiasaina betsaka satria io no atolotry ny Ubuntu sy ny Fedora amin'ny toerana misy anao. Hippo mihira nijanona tao amin'ny GNOME 3.38, fa efa misy ny fomba hanaovana ny fitsambikinana.
Ity lesona fampianarana hitako ity Fiakarana Linux, izay amariparitan'izy ireo ihany koa ny fomba hanampiana dock (spoiler: fametrahana Plank), ary avy aminy ny zava-dehibe indrindra dia ny manampy repository izay misy fonosana vaovao GNOME 40. Ny trano fitehirizana dia tsy ofisialy, izany hoe Canonical na olona mifandray ho an'ny orinasa no ao ambadik'ity, ka mila mitandrina manokana isika. Amin'izao fotoana izao dia hanao zavatra toa an'i Logix, mpanoratra ny lahatsoratra niankinako aho, ary manoro hevitra fa mety hahita olana mifanentana isika, noho izany tsy soso-kevitra ny hiakatra amin'ny ekipa lehibe, fa amin'ny iray mba hitsapana. Hilaza ihany koa izahay ny fomba hamerenana ireo fanovana, saingy hoy kosa izany, inona no tsara kokoa hanandrana amin'ny fametrahana izay tsy miankina aminay.
1 GNOME 40 ao amin'ny Ubuntu 21.04 miaraka amin'ity fampianarana ity
2 Ahoana ny fampiasana ireo fihetsika vaovao
3 Ahoana ny fomba famongorana ireo fanovana
GNOME 40 ao amin'ny Ubuntu 21.04 miaraka amin'ity fampianarana ity
Alohan'ny hanohizantsika dia manohy amin'ny fampitandremana isika, toy izany DING na ny fanitarana ho an'ny Ubuntu Dock dia tsy mandeha aorian'ny fanavaozana, ary hidika izany, ohatra, fa tsy afaka mamindra rakitra avy / mankany amin'ny birao intsony isika. Tsy ho afaka hiditra amin'ny faritra fisehoan'ny Fikirana koa isika.
Raha mbola te handroso ianao, zavatra efa nataoko tamina USB maharitra hahitana raha mandeha izy, dia araho fotsiny ireto dingana ireto:
Ampianay ny repository shemgp, averinay, iray tsy ofisialy:
Manavao ny fonosana rehetra izahay:
Mametraka lohahevitra tohanan'ny safidy roa manaraka izahay. Tsy miasa amin'ny GNOME 40 i Yaru, noho izany dia mila mametraka GNOME Session ianao, izay lohahevitra Adwaita, na lohahevitra Yaru tohana.
Mamerina sy mifidy ny safidy tadiavina izahay, toa ny session Yaru (Wayland).
Ahoana ny fampiasana ireo fihetsika vaovao
Raha ny hevitro, ny zavatra tsara indrindra momba ny GNOME 40, ny fampisehoana ankoatr'izay dia ny fihetsiny. Ankehitriny, miaraka amin'ny rantsan-tànana telo, dia ho hitantsika ny dock sy ny hetsika, izany hoe ny birao virtoaly. Raha misosa kely kokoa isika dia ho hitantsika ireo rindranasa. Indray mandeha amin'ity fahitana ity, miaraka amin'ny rantsantanana telo amin'ny ankavia / ankavanana dia miala amin'ny hetsika iray mankany amin'ny iray hafa isika, ary amin'ny rantsan-tànana roa dia hamakivaky ireo pejy samihafa amin'ny fampiharana izahay. Ho an'ireto farany dia ilaina ny manana fisie fampiharana farafahakeliny napetraka, amin'izay fotoana izay dia hiseho amin'ny pejy hafa ireo vaovao.
Raha tsy te hampiasa fihetsika ianao, ary efa nolazaiko taminao fa ranon-javatra izy ireo na amin'ny solosaina toa ny Lenovo aza izay tsy manana tontonana tsara indrindra eran'izao tontolo izao, azonao atao ihany koa ny miditra amin'ireo rehetra ireo amin'ny kitendry: ny Super ( META) lakile dia mampiseho antsika ny dock sy ny activités, zavatra izay azontsika koa Super + Alt + Up. Heveriko fa ahazoana aina kokoa ny fanalahidy Windows fotsiny hidiranao amin'ity fomba fijery ity, fa raha mampiasa Super + Alt + Up indray isika dia hiditra ao anaty vatasarihana fampiharana. Azontsika atao koa ny manampy ny ankavanana na ny ankavia hanodinana ireo hetsika.
Ahoana ny fomba famongorana ireo fanovana
Raha misy antony tiantsika hamongorana ireo fanovana, ny tokony hataontsika dia soraty ireto baiko ireto:
Raha nanavao an'i Yaru isika dia tsy maintsy mampiditra ireto manaraka ireto ihany koa:
Ny GNOME 40 dia dingana lehibe amin'ny kalitao, ka heveriko fa mendrika hanandramana farafaharatsiny. Nivoaka ny tsaho fa hisy fomba ofisialy hivoahana backport izay hataon'izy ireo, saingy mbola tsy niseho izany. Raha tsy manao izany amin'ny farany, Ubuntu 21.10 dia ho tonga miaraka amin'ny kinova fanavaozana ny birao, na dia antenaina ho GNOME 41 sahady aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ahoana ny fametrahana GNOME 40 amin'ny Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo
Ahoana ny fametrahana Nextcloud tsikelikely amin'ny VPS
Etcher, mamorona kapila USB bootable sy karatra SD ao amin'ny Ubuntu